ဂျစ်ကားတစ်စီး။ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စု။ အတွင်းဝန်များရုံး။ လမ်းခုလတ်။ ဂျစ်ကားဗုံးပေါက်ကွဲ။ လက်နက်ကိုင်များ အရိုးတစ်ခြား အသားတစ်ခြား တစ်ဖဲ့စီကျဆုံး။ ယမ်းငွေ့တလူလူဖုံးလွှမ်း။ ဂျစ်ကားတစ်စီး။ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စု။ အတွင်းဝန်များရုံး။ လမ်းခုလတ်။ ဂျစ်ကားဘီးပေါက်။ လမ်းဘေးထိုးရပ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်။ ဆက်လက်ထွက်ခွာ။ အတွင်းဝန်များရုံး။ အစည်းအဝေးခန်းမ။ ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ် လူသူမရှိ။ ချိန်ကိုက်ဗုံးပေါက်ကွဲ။ လက်နက်ကိုင်များ ခေါင်းတစ်ခြား ကိုယ်တစ်ခြား အတုံးလိုက်အရုံးလိုက် ကျဆုံး။ ယမ်းငွေ့တလူလူဖုံးလွှမ်း။ ဂျစ်ကားတစ်စီး။ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စု။ အတွင်းဝန်များရုံး။ အစည်းအဝေးခန်းမ။ ဝင်ရောက်စီးနင်း။ တန်ပြန်ပစ်ခတ်။ လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲ။ လက်နက်ကိုင်များ အပေါက်ဝမှာတင် လက်နက်တစ်ခြား လူတစ်ခြား အထပ်လိုက်ကျဆုံး။ Continue reading →
အမှိုက်တောင်းထဲက မွှေးရနံ့ (မိုးဝေး)
Categories: Kabyarz, Post Modern, Prose | Tags: မိုးဝေး, သူပဲအကြမ်း သူပဲအချော, Kabyarz, lanolay, moe way, post modern, Prose | Permalink.
ငါ့လက်ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ငါနဲ့အတူ လိုက်ငိုပါ (ဇေယျာလင်း)
(ကီလီမန်ဂျားရိုး – ဇေယျာလင်း။ နှစ်ကာလများ – ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၂၀၁၀။)
Categories: Kabyarz, Post Modern | Tags: ကီလီမန်ဂျားရိုး, ဇေယျာလင်း, Kabyarz, kilimanjaro, lanolay, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.
သမုဒ္ဒရာရှိတယ်၊ စကားလုံးထဲဝင်သွားတယ် ဆိုပါစို့ (ဇေယျာလင်း)
Categories: Kabyarz, Post Modern | Tags: ကီလီမန်ဂျားရိုး, ဇေယျာလင်း, Kabyarz, lanolay, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.
(ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ – အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၄။)
Categories: Kabyarz, Post Modern | Tags: တစ်ယောက်ချင်း, မောင်ပြည့်မင်, Kabyarz, lanolay, Maung Pyiyt Min, post modern | Permalink.
မောင်ချောနွယ် (၁၉၄၉ -၂ဝဝ၂) အခက်ကြီးထဲ ခုန်ချ (မောင်ပြည့်မင်း)
မောင်ချောနွယ် တစ်ခါတစ်လေ ဒုက္ခတွေ့တယ်
မောင်ချောနွယ် တစ်ခါတစ်လေ အရက်မူးတယ်
တချို့ သူမသေခင်ကတည်းက သစ္စာဖောက်ခဲ့ကြ
တချို့ သူသေပြီးမှ သစ္စာဖောက်လိုက်ကြ
”လူ တစ်ယောက်လုံး ထားခဲ့ရပြီးမှ
ဒီစောင်လေးကို ပြန်မယူတော့ပါဘူး” တဲ့
(ဟန်သစ် – ၂ဝဝ၄၊ အောက်တိုဘာ။)
Categories: Kabyarz, Post Modern | Tags: တစ်ယောက်ချင်း, မောင်ပြည့်မင်း, Kabyarz, lanolay, Maung Pyiyt Min, post modern | Permalink.